Ku soo dhawow Xilligii Duufaanta (Juun 2021) - Warbixin Ka Soo Laabashada Ka Soo Kabashada West Street - Gargaarka Musiibada ee Gargaarka
Bogga ugu weyn/updates/Ku soo dhowow Xilligii Duufaanta (Juun 2021) - Warbixin Ka Soo Laabashada West Street
Warbixinta soo socota ayaa ah dib uga soo noqoshada saaxiibadeena West Street Recovery, kuwaas oo abaabulayey ilaa saddex sano oo ka soo kabasho duufaantii Harvey isla markaana siinaya taageero joogto ah kooxaha bulshada ee Northeast Action Collective (NAC) iyo Harvey Forgotten Survivors Caucus. Milicsiga ay ka leeyihiin u diyaar garowga musiibada ee muhiimka ah iyo shaqada u doodistu waxay sawir ka bixinaysaa sida ay u muuqato taageerada foomka dheer ee bulshooyinka ay ka tageen dhismayaasha gargaarka dawladda isla markaana la kulma musiibo soo noqnoqota.
Saaxiibbada iyo qoyska taageerayaasha qaaliga ah ee ka soo kabashada West Street,
Sannad-guurad wanaagsan! Waxaan rajeyneynaa inaad faraxsan tahay oo caafimaad qabtid, inaad is tallaalayso oo aad waqti ku qaadaneyso meel u dhow (Haa, sida dhab ahaan jir ahaan isla qolka) dadka aad jeceshahay ee aad daryeesho.
Qeybtii hore ee sanadka waxay ahayd xilli koriin weyn oo WSR ah. Iyada oo laga jawaabayo #TexasDeepFreeze bishii Febraayo waxaan dib ula xiriirnay in ka badan 100 qoys (iyo xisaabinta) helitaanka biyo-gelintooda, iyo dadaallada abaabulka bulshadayadu waxay kordhiyeen boodbood iyo soohdin. Maaddaama xilligii duufaannadu bilaabmayso, waxaan ognahay in jawaabta degdegga ah ay u badan tahay in mar kale mar dhow loo baahdo. Iyo si daacadnimo buuxda ah, maanaan sameyn karin la'aanteed sii wadida taageerada shucuureed, maaliyadeed, farsamo iyo shaqaale.
Intii ka horreysay Juun xitaa bilaabmin, duufaannada ka imanaya niyad-jabka kulaylaha ayaa qariyay Houston. Xilliga Duufaanta ee 2021 waxaa la saadaalinayaa inay "ka firfircoon tahay celceliska taariikheed" laakiin dabayaaqadii May duufaannadii carradu buuxisay, isla markaana u dirtay biyo qulqulaya waddooyinka oo dhan ma ahayn duufaanno; may ahayn duufaanno kulaylaha; laakiin way xumaayeen. Laba macmiil WSR waxay lahaayeen saqafyo burburay mid kalena wuxuu lahaa dhowr inji oo biyo daad ah. Nasiib wanaag xubno ka socda Northeast Action Collective (NAC) iyo Harvey Forgotten Survivors Caucus ayaa ku dhaqaaqay ficil ay ku saxayaan saqafyada, waxqabadyo adkaysi leh oo ka socda guriga daadku wuxuu ka ilaaliyay qoyska wax saameyn ah oo daran. In kasta oo aan ku faaneyno kaabayaasha bulshada, daryeelka wadajirka ah iyo xirfadaha aan geynayno soo noqnoqoshada, waxaan ku daalnay noqoshada "adkeysi" waxaanan ognahay xubnaha cajiibka ah ee NAC iyo Caucus iyo xaafadaha NE Houston sidoo kale.
Halkii ay ku tiirsanaan laheyd awooda dadka deegaanka iyo kooxaha bulshada si ay ugu adkeystaan ​​ugana soo kabtaan naxdinta soo noqnoqota, Houston waxay u baahan tahay nidaam u diyaar garow musiibo oo wanaagsan. Si taasi u suurto gasho waxaan u baahan nahay inaan garwaaqsanno in duufaannada waaweyn ayan ahayn dhacdooyin naadir ah. Suurtagalnimada ay gaarsiisay weedha ah "500 sano daad daadsan" jaangooyooyinka ayaa duugoobay illaa laga gaadhayo xudduudka macluumaadka khaldan. Iyadoo la tixgelinayo jawiga hadda jira ee hambalyada is-daba-joogga ah iyo wax-qabad la'aanta cimilada ee hoggaamiyeyaashayada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale waa inaan u diyaar garownaa kuwa ugu xun ururrada madax-bannaan annagoo isla mar ahaantaana u ololeynayna isbeddel aasaasi ah oo badan oo ku saabsan habka aan u cunno tamarta iyo nolosheena.
WSR waxay isku dayeysay inay la dhaqan galiso diyaar garow beesheena yar si ay labadaba u ilaaliso midba midka kale una tusaaleeyo sida diyaargarowga dhabta ah uu u ekaan doono. Waxaan sameyneynaa albaab garaacid si aan u abuurno geedo taleefan oo aan u faafinno macluumaadka ku saabsan sida looga jawaabo inta lagu jiro duufaanta; rakibidda matoorro loogu talo galay dadka ay ugu nugul yihiin caafimaadka. Waxaan sidoo kale abuurnay "Go-Bags" oo ka caawin doona qoysaska inay ka guuraan ama ay hoy ku yeeshaan meel ammaan ah. (sawirka hoose: Margarita, Doris iyo kooxda inteeda kale ee udiyaar garowga musiibada ayaa isasoo urursaday oo bacaha is tusay)
WSR waxay isku dayeysay inay la dhaqan galiso diyaar garow beesheena yar si ay labadaba u ilaaliso midba midka kale una tusaaleeyo sida diyaargarowga dhabta ah uu u ekaan doono. Waxaan sameyneynaa albaab garaacid si aan u abuurno geedo taleefan oo aan u faafinno macluumaadka ku saabsan sida looga jawaabo inta lagu jiro duufaanta; rakibidda matoorro loogu talo galay dadka ay ugu nugul yihiin caafimaadka. Waxaan sidoo kale abuurnay "Go-Bags" oo ka caawin doona qoysaska inay ka guuraan ama ay hoy ku yeeshaan meel ammaan ah. (Waad ku deeqi kartaa dadaalkeena boorsada musiibada halkan.)
Dadaalkeena udiyaar garowga musiibada waxaa dalbaday bulshadeena, waana la ogaaday. Waxaa na weeydiiyey labada gudoomiye degmo iyo lataliyayaasha magaalada hadii aan boorsooyin ka heli karno xubno badan oo bulshada ka mid ah. Waa sasabasho iyo niyad jab labadaba. WSR waa inaysan kujirin soo afjarida u diyaargarowga. Waxaan u baahanahay inaan xaqiiqda ka dhigno dadaallada rasmiga ah. Kulankii ugu dambeeyay ee Houston Xafiiska Maareynta Degdega ah waxay la kulantay xubnaha NAC waxayna u soo jeediyeen in dadka naafada ah sida ugu fiican ee caawinaad u helaan ay tahay inay isqortaan barnaamij loogu magac daray SEAR. Ben Broadway, xubin ka tirsan NAC, indhoole iyo u doodaha indha la'aanta, wuxuu ahaa mid qumman, waxaa lala saxiixday SEAR muddo toban sano ah waligiisna ma helin wax caawimaad ah haba yaraatee. Intii lagu gudajiray duufaantii jiilaalka Houston waxay lahayd 800 sariirood oo leh taxaddarro habboon oo ku habboon xaalad degdeg ah. In kabadan laba milyan oo reer Houstoniyiin ah ayaa lumiyay awood. Diyaargarow la'aanta buuxda ayaa xitaa ka sii jahwareersan markaad barato taas sida ku xusan FEMA, dollar kasta oo Diyaarinta Musiibooyinka iyo kharashka yareynta halista dabiiciga ah wuxuu keydiyaa toddobo doolar oo ah lacagaha soo kabashada. Laakiin tani maahan wax ku saabsan doolar ee waa wax ku saabsan nolosha.
Ugu dambeyntiina, xitaa haddii si weyn loo maalgeliyey, u diyaargarowga heerka qoysku wuxuu tagi karaa oo keliya illaa hadda. Waxaan ubaahanahay mashaariic waawayn oo kaabayaal ah, oo cawl iyo cagaarba leh, si aan si wax ku ool ah biyaha uga fogeyno guryaha, si loo hubiyo in korantada ay nabad tahay, si loo hubiyo inay dadku haystaan ​​meelo ay ku hoydaan inta lagu jiro duufaanta. Waxaa wax laga xumaado ah inaysan jirin heer dowladeed oo keenaya ilaalinta loo baahan yahay. Bishan, laga bilaabo Gobolka Guud ee Xafiiska Guud ee Gobolka Texas wuxuu xukumay inuu dirayo eber doollar, ($ 0.00!) Oo ka mid ah $ 1.1 bilyan ee lacagta yareynta daadadka la codsaday. Lacagtani waxay fure u yihiin wax ka qabashada $ 1.4 bilyan oo farqi ah oo u hartay si loo dhammaystiro mashaariicda ka socota dammaanadda 2018. Go'aanka GLO waa cunsuriyad bareer ah iyo ficil gacan ka hadal ah oo aan la xakamayn karin. Waxaan ku faraxsanahay in cabashada guryaha cadaalada ah ee HUD ee ku saabsan GLO ay socoto shaqadeeda; waan ku taageeri doonnaa si kasta oo aan awoodno. Isla mar ahaantaana waxaan aaminsanahay in degmadu sidoo kale ku xad gudubtay xeerarkoodii dammaanadda ee u degsan sinnaanta. In kasta oo ay jirto wadarro dhaqaale oo dhan 27%, Halls iyo Greens Bayou, oo ay ku noolyihiin macaamiisheennu, oo lahaa guryihii ugu badnaa ee ay daadadku mariyeen xilligii Harvey ayaa waxaa u dhiman 74.4%. Tani maahan sinaan gobolkuna wuu ogyahay. Waxaa laga yaabaa inay taasi tahay sababta (iyo cadaadiska NAC hubaal wuxuu qayb ka ahaa tan) Agaasimihii Xakamaynta Daadka ee Degmada Harris Russ Poppe ayaa is casilay dhammaadkii usbuucan. Waxay sii deynayaan qorshe cusub Juun 29, waxaanan markhaati ka nahay kulan kasta oo maxkamadeed ilaa bishii Maarso waxaan rajeyneynaa inaan ku riixno ilaalinta ugu fiican ee suurtagalka ah ee NE Houston.
Waxaan ku faraxsanahay dadaalkeena sanadkaan, waxaana ku faraxsanahay inaan sii wadno dhismaha nidaamka cadaalada musiibooyinka ee Houston iyo wixii ka baxsan. Laakiin keligeen ma sameyn karno waxaana u baahannahay hoggaankeena siyaasadeed iyo dhaqan si aan u muujino deg-deg aad u badan. Waxaan rajeyneynaa in lagugu dhiirigeliyey inaad ka mid noqotid dhaqdhaqaaqa taas oo ka dhigaysa in degdeggaasi dhaco. Waqtiga tillaabooyinka yaryar ayaa si murugo leh u dhammaaday. Daqiiqaddu waxay u baahan tahay geesinnimo, raaxo-darro iyo koritaan. Halkaas ayaan joogi doonnaa. Waxaan rajeynaynaa inaad nagu soo biirto.
- Soo kabashada West Street